लामोसमयसम्म श्रीमान,श्रीमती भै काम गरेको र रियल लाइफमा प्रेममा परेर छुटेकी अंकितले जव सुशान्तको दु:खद खबर थाहा पाइन् ! – Sidha Onlinepatra
Tuesday, October 19 2021
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन-३ को फस्ट रनरअप ताराको आमा सार्वजनिक
कपनकी महिला घरको गेट बन्द गर्दै थिईन, घाँटीबाट एक्कासी २ तोलाको सिक्री गायब
धन कमाउने आश बोकेर विदेश गएकी २१ बर्षीय युवती ७ महिनाको ग’ र्भ बो के र फर्किएपछी….(भिडियो)
महाकालीमा जयसिंह धामीको शव खोज्न ड्रोनको प्रयोग
राजेश हमालको ५ ल’फडा : पहिलो फिल्ममै ‘नकआउट’, सुरुमै हिरोइनसँग मनमुटाव
दुर्गेश थापाको ‘बिच बिचमा–५’ मा पल शाहको दमदार डान्स भिडियो सहित
कतारमै रहेका नेपालीहरुको लागि खुसीको खबर !
श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
काठमाडौँबाट आउँदै गरेको सुमो दुर्घटना : चालकको मृत्यु, ४ जना घाइते,
नेपाल आउने भयो केटीएम ७९० ड्युक, खुल्यो बुकिङ, कति पर्छ मूल्य ?
मुख्य पृष्ठ /News/लामोसमयसम्म श्रीमान,श्रीमती भै काम गरेको र रियल लाइफमा प्रेममा परेर छुटेकी अंकितले जव सुशान्तको दु:खद खबर थाहा पाइन् !
लामोसमयसम्म श्रीमान,श्रीमती भै काम गरेको र रियल लाइफमा प्रेममा परेर छुटेकी अंकितले जव सुशान्तको दु:खद खबर थाहा पाइन् !
1,9702minutes read
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले देहत्याग गरेका छन्। मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा सो लगाएर देहत्याग गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अभिनेता लकडाउनको बेला एक्लै बस्दै थिए । प्रहरी उनको अपार्टमेन्ट पुगेको छ तर देहत्याग कारण भने खुलेको छैन। भारतयी सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार उनी केहि दिन देखि अस्वस्थ महसुस गरिरहेका थिए ।
भारतीय समाचार माध्यामले जनाए अनुसार सुशान्त र उनका केहि साथीहरु घरमा संगै थिए उनि साथीहरुसंग बिदा भएर आफ्नो कोठामा चुक्कल लागेर सुतेको खुलेको छ । पछि साथीहरुले बोलाउंदा ढोका नखुलेपछि उनीहरुले झ्यालबाट हेर्दा झु ण्डीएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
उनको यो खबरसंगै अहिले बलिउडमा एउटा छुट्टै सन्नाटा छाएको छ । यसै क्रममा पूर्वप्रेमिका अंकिता लोखण्डे उनको दु:खद खबर सुनेपछि निशब्द बनेकी छिन् । भातरीय मिडियाले अंकितालाई सुशान्तले देहत्याग गरेको विषयमा प्रश्न गरेपछि उनले ‘के ????….’ भनेर फोन का’टिदिएकी छिन् ।
उनीहरु दुवै टेलिभिजन सिरियल ‘पवित्र रिश्ता’मा लामो समय काम गरेर चर्चित भएका थिए । यसै सिलसिलामा उनीहरु सम्बन्धमा समेत रहेका थिए । पछि सुशान्त बलिउड गएपछि उनीहरुहरु सम्बन्धमा ब्रेकअप भएको थियो ।
कुनै समयमा एक अर्काको गहिरो प्रेममा रहेका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत र अंकिता लोखण्डे ४ बर्ष अघि नै अलग भइसकेका छन् । अंकिता र सुशान्त ‘पवित्र रिश्ता’ नामक टेलिसिरियलमा पति–पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्नेताका दुवै एक अर्काको प्रेममा थिए ।
तर यी दुवैको लामो पे्रम सम्बन्ध सुशान्त बलिउडको ठूलो पर्दामा स्थापित भएसँगै समाप्त हुन पुग्यो । यसरी सम्बन्ध तोड्दा अनेकौं खबरहरु आएपनि दुवैले यसबारे कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। तर सम्बन्ध टु’टेपछि अंकितालाई भने ठूलो झड्का लागेको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन ।
किनकि, सुशान्त बलिउड फिल्ममा एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गए भने उता अंकिताले अभिनयको दुनियाबाट आफुलाई राखिन् । अंकितले पछि बलिउडमा डेब्यू गरेपछि र प्रेम सम्बन्धबारे एक अन्तरवार्ताका क्रममा खुलेर बोलेकी थिइन् । अंकिताले ब्रेकअपले उनको करियरमा कुनै असर नपरेको तर त्यसबेला काम र प्रेमलाई एकसाथ सम्हाल्न नसकेको बताएकी थिइन् । उनले ब्रेकअप पछि गरेको कुराकानी अंश जस्ताको तस्तै :
उनले अगाडि भनेकी छिन् ‘म जब काम गरिरहेकी थिएँ,त्यो बेला सन्तुष्ट थिएँ र जुन बेला कामदेखि टाढा थिएँ त्यस समयमा पनि सन्तुष्ट नै थिएँ । म यो भन्न चाहन्न कि ब्रेकअपले मेरो करियरलाई असर गरेन तर पनि प्रेम र काम अलग चिज हुन् । यि दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी हुन्छ, तर म यसमा सफल हुन सकिन ।’ उनले अहिले आएर आफुलाई माया गर्न सिकेको बताएकी छिन् । साथै अब उनको माया भनेको उनको करियर रहेको र आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केवल कामका लागि प्रयोग गर्ने बताएकी छिन् ।
उनले अगाडि थपिन्, ‘तर यसको मतलब अब आफुले कुनै सम्बन्धमा रहन नचाहेको भन्ने होईन । म अहिले पनि मेरो जीवनमा राजकुमारको प्रतिक्षामा छु । तर यस्तो भन्नुको मतलब कसैको खोजीमा भने अवश्य छैन । किनकी म यस्तो कुरादेखि धेरै अगाडि आइसकेँ । अब मलाई जीवनमा केही बन्नको लागि साथीको आवश्यकता छैन ।’
सांसद् सरिता गिरीविरुद्ध रमेश प्रसाईले दिए उजुरी, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
पेटको बच्चा सहित पर पुरुष संग भागेकी श्रीमती संग श्रीमानले आफ्नो बच्चा मागे पछि
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एमालेका अर्का नेता पनि अस्ताए
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?
विदामा रहेका नेपाली कामदार साउदी फर्कन पाउने
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित्
फेसबुकमा Live आएर त्यसो गर्नुको कारण आमाले खु लाईंन , छोरीको बिहे भएको थियो ( भिडियो सहित )
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलासँग यौ’न स’म्बन्धको माग, नमाने खाना न’दिने ध’म्की
सुस्मिताले निधन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, ह’त्यामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)